किन दुख्छ ढाड, दुखाई कसरी कम गर्ने? | दिव्य जागरण
किन दुख्छ ढाड, दुखाई कसरी कम गर्ने?
दुख्नु भनेको शरीरका कुनै पनि अंगमा भएको चोटको कारण हुने पीडादायी भोगाइ हो। अंगका जुनजुन भागमा जेजस्ता पीडा, समस्याका घाउचोट छन् तिनका समाधान वा उपचार गर्ने विधि पनि बेग्लाबेग्लै हुन्छन्।
समान्यतयाः गर्दनको पछाडि (घिच्रो) र नितम्ब (चाक) बीचको मध्यरेखामा हुने दुखाईलाई ढाड दुख्नु भनिन्छ। मेरुदण्डको निर्माणमा सहभागी हड्डी र मांसपेशी लाई असर गर्ने रोग र अवस्थाले ढाड दुख्छ। यस्तो दुखाई मेरुदण्ड मा जहाँ कहिँ पनि हुन सक्दछ। तर मुख्य गरेर मेरुदण्डको तल्लो भागको समस्या बढी देखिएको छ। मांसपेशी कडा भए झैँ अथवा घाऊ भए झैं अथवा खुट्टा पसार्दा वा मेरुदण्ड चल्दा भएको तीब्र दुखाई दुखेको ठाउँ बाट अन्यत्र सरे झैं अनुभव हुन्छ।
वाथ एवं हड्डी खिइने रोगः वाथ अर्थात् विभिन्न कारण ले जोर्नी दुख्ने र सुन्निने रोग र उमेर अनुसार मेरुदण्ड खिइने र नशा थिचिने समस्या ले ढाड दुख्न सक्छ। तेस्तै हड्डी को संक्रमण, हड्डीको मासी (क्याल्सियमको कमीले हड्डी कमजोर हुनु), अस्थिमृदुता (osteomalacia) आदि ले पनि ढाड दुख्न सक्छ।
मूत्रनलीको समस्या: जस्तै मृगौलामा पानी जम्नु, मृगौलाको पत्थरी, मूत्राशय, मूत्रनलीको तल्लो भागमा संक्रमण आदिद्वारा तल्लो ढाडमा दुखाई हुन सक्दछ। गर्भावस्था, महिनावारीमा र महिनावारी पछिको समयमा सामान्यतयाः ढाड दुखेको हुन्छ।
धेरैजसो ढाडको दुखाई छोटो हुन्छ र घरेलु उपचार र दुखाई कम गर्ने औषधीबाट निको हुन्छ। तर निम्न अवस्थामा भने चिकित्सकीय सल्लाहलिनु जरुरी हुन्छ-
दैनिक जीवनका क्रियाकलाप नै गर्न नसकिने गरी ढाड दुखेमा। ज्वरांश र सामान्य विसंचो सँगै ढाड दुखेमा।
यदि आन्द्रा वा मूत्राशयमा नियन्त्रण नभएमा यो स्नायुगत समस्या वा उपचारको अवस्थाको कारण हुन सक्छ। जसको उपचार उचित तवरले गर्नुपर्दछ।
दुखाई र जलन कम गर्न इबुप्रोफेन, पारासिटामोल जस्ता जलन/सुजन प्रतिरोधक ननस्टेरोइड औषधीहरूको आवश्यकता पर्दछ। तातो वाबरफको स्थान विशेषमा गरिने प्रयोगले पनि जलन र दुखाई लाई कम गर्न सक्दछ।
यदि नशा च्यापिएको छ भने अली बढी ध्यान दिनुपर्छ। नशा च्यापिएकोलाई अलि कडा खालको ‘स्टेरवाइडहरू’, दुखाई कम हुने औषधिहरू खानुपर्छ र ६ हप्तासम्म बेड रेष्ट गर्नुपर्छ। मांसपेशीमा मात्रै समस्या आएको भए भए दुई दिन मात्रै बेडरेष्ट गर्दा ठीक हुन्छ।
६ सातामा पनि ठिक भएन भने सर्जरी नै गर्नुपर्छ तर यो सम्भावना निकै कम हुन्छ।
पत्थर छ कि, पाठेघरमा समस्या छ कि भनेरसमेत ध्यान दिनुपर्छ। पिसाबमा केही समस्या छ कि परीक्षण गर्नुपर्छ।
डाक्टरको निगरानीमा औषधि खानुपर्छ। औषधिले सुन्निएको कम गर्छ नशा सुन्नीएर साँघुरिएको भागलाई खुलाउने कामगर्छ। नशा च्यापिने कुरा कसैको नियन्त्रणको कुरा होइन। यो कुरकुरे हड्डी फुटेर पनि हुन्छ।नशा च्यापिएको छ भने दुखिरहन्छ। अर्को व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएर पनि हो।
यसलाई लापरबाही गरियो भने ढाड दुखिरहन्छ धेरै नै लापरबाही गर्‍यो भने कुरकुरे हड्डी फुटेर नशा च्यापिन जान्छ। ढाडको ‘सर्जरी’ बिरलै मात्र गरिन्छ। बिरामीले सहनै सकेन भने मात्रै ‘सर्जरी’ गर्नुपर्छ। यसको जटीलता आफ्नै ठाउँमा छ।
भूईमा लम्पसार परेर मांसपेशीको तल्लो भागलाई तन्काउने र मांसपेशीको तल्लो भागलाई तन्काउन घुंडा खुम्च्याएर छातीमा ल्याउने।
मनौबैज्ञानिक तनाव र थकाईसँग सम्बन्धित ढाडको दुखाई कम गर्न नियमित हल्का व्यायाम गर्न सकिन्छ।
ढाडको मालिसले बाउँडिएको निको भई ढाडको दुखाई कम गर्न मद्दत पुग्दछ र मांसपेशीमा संचो हुन्छ। दुखाई मार्न मल्हमसँगै मालीसले पनिदुखाइमा काम गर्छ।
मनतातो पानीमा नुहाउनाले सामान्य तनाव दूर हुन्छ र संचो हुन मद्दत पुग्दछ। मनतातो पानीले बाउँडिएको र तन्किएको मांसपेशीमा संचोहुन्छ। पानीको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुनुहुँदैन।
यदि अन्य विधिद्वारा बाँउडिएको कम गर्न मद्दत नपुगे वा दुखाई लामो भएमा दुखाई कम गर्न ५०० मिलिग्रामको ओरल पारासिटामोल औषधीप्रयोग गर्नुपर्दछ। दुखाई कम गर्ने अन्य औषधी लिनु भन्दा अघि चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
लामो समयसम्म कुप्रिएर बस्न हुँदैन। प्रत्येक २० देखि ३० मिनटसम्म उठबस गर्ने र खुट्टा तन्काउने गर्नुपर्दछ। बस्दा डँडाल्नोलाई सिधा राखीसामान्य बसाई हुनुपर्दछ।
छोटो कुर्कुच्चा भएको र आरामदायक जुत्ता लगाउनुपर्दछ। अग्लो कुर्कुच्चा भएको जुत्ताले झन् बढी गाह्रो र असर पार्न सक्दछ। साथै तल्लोडँडाल्नोमा दबाब सिर्जना गर्न सक्दछ।
विशेषतः गर्भावस्थामा र बच्चा जन्मिसकेपछि केही महीना लामो समयसम्म उभिनु हुँदैन।
लामो समय उभिएर गर्ने काम नगर्ने।
खानासँगै पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम र भिटामिन डी लिने।
यस्तो छ, शितगंगा नगरपालिकामा एमालेको तयारी